DEG DEG:- Wararkii ugu dambeeyay xaaladda degmada Afgooye iyo dagaal halkaasi dib uga qarxay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Wararkii ugu dambeeyay xaaladda degmada Afgooye iyo dagaal halkaasi dib uga qarxay
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helaayo degmada Afgooye ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay dagaal rogaal celis ku soo qaadeen degmadaasi.
Dagaalkaasi oo haatan ka socda bartamaha degmada Afgooye ayaa la sheegayaa inuu u dhaxeeyo ciidamada dowladda federaalka oo garab ka helaaya kuwa AMISOM iyo dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab.
Dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ayaa maanta muddo saacado ah la wareegay degmada Afgooye, waxayna dhufayso ka galeen dhamaan wadooyinka soo gala degmadaasi.
Labada dhinac ayaa waxay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, waxayna degmada Afgooye caawa tahay mid ay xaaladeydu kacsan tahay.
Ilaa iyo haatan lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi, balse warar madax banaan oo nasoo gaaraya ayaa sheegaya in wadooyinka qaar lagu arkay meydad badan oo ka tirsan dagaalyahanada Al-shabaab.
Sidoo kale saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa la sheegayaa inay dagaalkaasi ku dhinteen, inkastoo aan si rasmi ah looga hayn faaf-faahin intaas kasii dheer.
Wixii warkaan kusoo kordha dib kala soco kale Insha Allaah